ကလိုစေးထူး: ပြည်ပန်းညို မချိုဘဲ ဆားကို သူစွပ်စွဲ…
သူတို့က တခြားသူတွေကို လိမ်တာထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လိမ်နေကြတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်နေပြီထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလိမ်တွေကိုယ်ယုံပြီးတော့ စိတ်ရောကောင်းကြသေးရဲ့လား မသိပါဘူး။ မရှက်ကြဘူးလားလို့တောင် မမေးချင်လောက်အောင်ပါပဲ။
Oct 13, 2007, 9:44:00 PM
Oct 14, 2007, 8:17:00 AM
very very very good article, we need more authors like you to sacrifice what their comment
Oct 14, 2007, 9:15:00 AM
read this article for mizzima. thumb up!
Oct 18, 2007, 3:55:00 AM